Home Wararka Cumar Finish oo Booqday Isbitaalada la geeyay dhaawacyadda ?
Cumar Finish oo Booqday Isbitaalada la geeyay dhaawacyadda ?
Gudddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa booqday Isbitaalka Madiina halkaas oo la geeyay dhaawacydii ugu badnaa ee kusoo wax yeeloobay qaraxii isgoyska Ex Contoral Afgooye.
Gudddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa balan qaaday in maamulka gobolka Banaadir oo kaa shanaaya DFS uu dalka dibadiisa u qaadi doono dadka dhaawacyada culus qaba ee wadan wax looga qaban waayo.
Agaasimaha guud ee Isbitaal Madiina Maxamed Yuusuf ayaa kormeerka kadib la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in dhaawacyo aad u badan oo isbitaalka xataa uusan awoodin la keenay,islamarkaana ay ku jiraan Xaalad adag oo u baahan gurmad dheeraad ah.